ဆိုးလိုက်တဲ့ချောင်း - OnDoctor
By Wai Yan Lin	 On Jan 4, 2018 Last updated May 5, 2018
အား . . . ကျွတ် . . . ကျွတ် . . . ။ အအေးကြိုက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော် ဒီနေ့မနက် အိပ်ရာထတော့ လည်ချောင်းနာနေပြီလေ။ လည်ချောင်းစနာပြီဆိုကတည်းက သူ့နောက်ကလိုက်လာမှာက ချောင်းဆိုးခြင်းဆိုတာ မလွဲဧကန်ပါပဲ။ ပူလောင်အိုက်စပ်၊ ကားကြပ်လှတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာနေရတဲ့ ကျွန်တော် . . . ။ ရန်ကုန်ရာသီဥတုကတော့ အပြင်ဘက်မှာဆို ပူချက်ကတော့ ပြောမနေပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထဲမှာကျ ဟန်ကျသား။ အပြင်မှာလောက် သိပ်မပူပေ။ ထိုထက်တိုက်ခန်းနံရံမှာ ကြွေပြားကပ်ထားလျှင် သိပ်မပူတော့ပေ။
ကျွန်တော်သည် ညတိုင်းအိပ်လျှင် အင်္ကျီအပါး သို့မဟုတ် စွပ်ကျယ်ဝတ်ပြီးသာ အိပ်လေ့ရှိပြီး အမြဲလိုလို ပန်ကာဖွင့်ထားပြီးမှ အိပ်လေ့ရှိသည်။ ရာသီဥတုက နေ့ဘက်ပူပြီး ညဘက်ဆို နည်းနည်းအေးတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခန့်မသင့်ရင် အအေးပတ်ပြီး လည်ချောင်းစနာပါတော့တယ်။ လည်ချောင်း နာတာကလည်း မနက်ပိုင်းအိပ်ရာထကာစလောက်ပါပဲ ပြီးရင်တစ်နေကုန် အကောင်းပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သတိမထားမိဘဲ နောက်ရက် ညဘက်တွေလည်း ဒီလိုပဲ အိပ်စက်တတ်ကြပါတယ်။ ကြာလာတဲ့အခါ လည်ချောင်းနာရုံတင်မက သလိပ်ခဲတွေပါ ထွက်လာပါတော့တယ်။ ပြီးတာနဲ့ အဟွတ် အဟွတ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ စတင်ကြားလာရပါတော့တယ်။ ကဲ အဲဒီမှာ ချောင်းဆိုးခြင်း စတင်လာပါတော့တယ်။
ချောင်းဆိုးပြီဆိုတာနဲ့ တော်တော်များများက နာတာရှည် ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ ခဏတာဆိုးတာ သိပ်မရှိပါဘူး။ နာတာရှည် ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာ စိတ်အနှောက်အယှက် အတော်လေးဖြစ်ရပါတယ်။ ချောင်းဆိုးခြင်းကြောင့် ညဘက်တောင် အိပ်မရတာတွေ၊ ချောင်းဆိုးရလွန်းလို့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုထိ တောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးရုံတင် မဟုတ်ဘဲ ချောင်းဆိုးတာနဲ့အတူ ပျို့အန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်း၊ နောက်ဆုံး နံရိုးတောင်ကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ နံရိုးကျိုးတယ်ဆိုတာက ချောင်းတအားဆိုးရင်ပါ။
နာတာရှည်ချောင်းဆိုး တယ်ဆိုတာ အနည်းဆုံး ၈ ပတ်လောက်အထိကြာတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာတော့ ၄ ပတ်လောက်ထိ ဆိုးနေတတ်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးတဲ့လက္ခဏာ စခံစားရပြီဆို သူ့တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားဟာတွေနဲ့ တွဲနေတတ်ပါတယ်။ နှာစေးခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ လည်ချောင်းယားယံခြင်း၊ လည်ချောင်းခဏခဏရှင်းရခြင်း၊ အသံကွဲအက်လာခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ တရွှီရွှီ မြည်တတ်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ ပါးစပ်ထဲ ချဉ်စုပ်စုပ်အရသာ ခံစားရခြင်း၊ သလိပ်ထွက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်၊ ဝမ်းဗိုက်ရှိ ကြွက်သားများ နာကျင်တတ်ပါတယ်။
ဒါဆိုဘာကြောင့် ဒီချောင်းကြီးက ဆိုးလာရတာလဲ။ တခါတလေ ချောင်းဆိုးတာကတော့ လည်ချောင်းထဲ ပြင်ပက ဖုန်တစ်ခုခုဝင်သွားရင် ပြန်ထုတ်တဲ့ သဘောအနေနဲ့ ချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချောင်းဆိုးတာ ၁ ပတ်လောက်ရှိနေရင်တော့ အကြောင်း တစ်ခုခုရှိနေပါပြီ။ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့ နှာစေး၊ နှာရည်ယိုခြင်းဖြစ်တဲ့အခါ နှာရည်ဟာ လည်ချောင်းထဲ စီးသွားလျှင် ချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိနေရင်လည်း ချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။ နောက်အစာအိမ် ချဉ်ရည်ပြန်ဆန်တတ်တဲ့ရောဂါမှာဆိုလည်း အရည်ဟာ လည်ချောင်းကို လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ချောင်းဆိုးလာရပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ အချက် ၃ ချက် တစ်ခုခုကြောင့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ နာတာရှည် ချောင်းဆိုးခြင်းကို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိ ဖြစ်စေပါတယ်။ အခြားအကြောင်းအရာလေးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အပေါ်လေလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ နမိုးနီးယားလို့ခေါ်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါတွေမှာလည်း ချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။ နောက် သွေးပေါင်ကျ ဆေးတွေထဲက ACEI အုပ်စုဝင်တွေဆိုလည်း တချို့လူတွေမှာ ချောင်းဆိုးစေပါတယ်။ နာတာရှည် လေပြွန်ရောင် ရောဂါရှိသူတွေ အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သူတွေမှာလည်း ချောင်းဆိုးစေတတ်ပါတယ်။
ချောင်းဆိုးမှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးဝင်တတ်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးခြင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းထဲငြီးစီစီဖြစ်ခြင်း၊ မတရားအန်ခြင်း၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံး နံရိုးပါ ကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
နာတာရှည်ချောင်းဆိုးတဲ့ အကြောင်းကို ရှာဖွေဖို့အတွက် စစ်ဆေးခြင်းအချို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်ခြင်း၊ အဆုတ်အလုပ်တာဝန် ကောင်းမကောင်းစစ်ခြင်း၊ သလိပ်နာမူနာ ယူ၍စစ်ဆေးခြင်း၊ မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း တွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကုသတဲ့အခါမှာတော့ အဓိကဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းကို ရနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူနာတော်တော်များများမှာက တစ်ခုထက် ပိုနေတတ်ကြပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဆေးတွေကတော့ နှာစေးပျောက်ဆေးတွေ၊ ပန်းနာရင်ကြပ်ရှူဆေးတွေ၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေ၊ အစာအိမ်ဆေးတွေ၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေ သောက်သုံးလို့ ရပါတယ်။ သောက်ဆေးတွေကတော့ ချောင်းဆိုးရတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
အိမ်တွင်းကုထုံးနည်းတွေလည်း တချို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ တချို့က ပျားရည်တစ်ဇွန်းကို ရေနွေးနဲ့ရောပြီး သောက်ကြတယ်။ တချို့က ဂျင်းပြုတ်ရည်ပူပူသောက်ကြတယ်။ တချို့က လျက်ဆားရယ်၊ သံပရာရည် ရောသောက်တယ်။ တချို့ လျက်ဆားရယ်၊ သံပရာရည်ရယ်၊ ပျားရည်ရယ်၊ ဂျင်းရယ် ရောသောက်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ပျောက်လား မပျောက်လားတော့ သေချာမသိပါ။
ချောင်းဆိုးနေသူဟာ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ရပါမယ်။ ဖုန်ထူထပ်တဲ့နေရာ သွားလာခြင်း၊ လူထူထပ်တဲ့နေရာသွားလာခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်သူဆိုလျှင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ မသောက်သူဆိုလျှင် ဆေးလိပ်ငွေ့ဝေးဝေးရှောင်ပါ။ အစာစားလျှင် နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏစားပေးပါ။ အစာစားပြီး ၃ နာရီ၊ ၄ နာရီလောက်ကြာမှ လှဲပေးပါ။ ညအိပ်လျှင် ခေါင်းအုံးမြင့်မြင့်ထားအိပ်ပါ။
Author: ဒေါက်တာ ဇွဲကောင်းချစ်, Healthcare Journal, Vol 8, no 49 (22.12.17)
အား . . . ကြှတျ . . . ကြှတျ . . . ။ အအေးကွိုကျတတျတဲ့ ကြှနျတျော ဒီနမေ့နကျ အိပျရာထတော့ လညျခြောငျးနာနပွေီလေ။ လညျခြောငျးစနာပွီဆိုကတညျးက သူ့နောကျကလိုကျလာမှာက ခြောငျးဆိုးခွငျးဆိုတာ မလှဲဧကနျပါပဲ။ ပူလောငျအိုကျစပျ၊ ကားကွပျလှတဲ့ ရနျကုနျမွို့ကွီးမှာနရေတဲ့ ကြှနျတျော . . . ။ ရနျကုနျရာသီဥတုကတော့ အပွငျဘကျမှာဆို ပူခကျြကတော့ ပွောမနပေါနဲ့။ ဒါပမေယျ့ အိမျထဲမှာကြ ဟနျကသြား။ အပွငျမှာလောကျ သိပျမပူပေ။ ထိုထကျတိုကျခနျးနံရံမှာ ကွှပွေားကပျထားလြှငျ သိပျမပူတော့ပေ။
ကြှနျတျောသညျ ညတိုငျးအိပျလြှငျ အင်ျကြီအပါး သို့မဟုတျ စှပျကယျြဝတျပွီးသာ အိပျလရှေိ့ပွီး အမွဲလိုလို ပနျကာဖှငျ့ထားပွီးမှ အိပျလရှေိ့သညျ။ ရာသီဥတုက နဘေ့ကျပူပွီး ညဘကျဆို နညျးနညျးအေးတတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခနျ့မသငျ့ရငျ အအေးပတျပွီး လညျခြောငျးစနာပါတော့တယျ။ လညျခြောငျး နာတာကလညျး မနကျပိုငျးအိပျရာထကာစလောကျပါပဲ ပွီးရငျတဈနကေုနျ အကောငျးပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ သတိမထားမိဘဲ နောကျရကျ ညဘကျတှလေညျး ဒီလိုပဲ အိပျစကျတတျကွပါတယျ။ ကွာလာတဲ့အခါ လညျခြောငျးနာရုံတငျမက သလိပျခဲတှပေါ ထှကျလာပါတော့တယျ။ ပွီးတာနဲ့ အဟှတျ အဟှတျဆိုတဲ့ အသံတှေ စတငျကွားလာရပါတော့တယျ။ ကဲ အဲဒီမှာ ခြောငျးဆိုးခွငျး စတငျလာပါတော့တယျ။
ခြောငျးဆိုးပွီဆိုတာနဲ့ တျောတျောမြားမြားက နာတာရှညျ ဆိုးတတျကွပါတယျ။ ခဏတာဆိုးတာ သိပျမရှိပါဘူး။ နာတာရှညျ ခြောငျးဆိုးတယျဆိုတာ စိတျအနှောကျအယှကျ အတျောလေးဖွဈရပါတယျ။ ခြောငျးဆိုးခွငျးကွောငျ့ ညဘကျတောငျ အိပျမရတာတှေ၊ ခြောငျးဆိုးရလှနျးလို့ ပငျပနျးနှမျးနယျမှုထိ တောငျဖွဈနိုငျပါတယျ။ ခြောငျးဆိုးရုံတငျ မဟုတျဘဲ ခြောငျးဆိုးတာနဲ့အတူ ပြို့အနျခွငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ စိတျကခြွငျး၊ နောကျဆုံး နံရိုးတောငျကြိုးသှားနိုငျပါတယျ။ နံရိုးကြိုးတယျဆိုတာက ခြောငျးတအားဆိုးရငျပါ။
နာတာရှညျခြောငျးဆိုး တယျဆိုတာ အနညျးဆုံး ၈ ပတျလောကျအထိကွာတတျပါတယျ။ ကလေးတှမှောတော့ ၄ ပတျလောကျထိ ဆိုးနတေတျပါတယျ။ ခြောငျးဆိုးတဲ့လက်ခဏာ စခံစားရပွီဆို သူ့တဈခုတညျး မဟုတျပါဘူး။ တခွားဟာတှနေဲ့ တှဲနတေတျပါတယျ။ နှာစေးခွငျး၊ နှာရညျယိုခွငျး၊ လညျခြောငျးယားယံခွငျး၊ လညျခြောငျးခဏခဏရှငျးရခွငျး၊ အသံကှဲအကျလာခွငျး၊ အသကျရှူမဝခွငျး၊ တရှီရှီ မွညျတတျခွငျး၊ ရငျပူခွငျး၊ ပါးစပျထဲ ခဉျြစုပျစုပျအရသာ ခံစားရခွငျး၊ သလိပျထှကျခွငျး၊ ရငျဘတျ၊ ဝမျးဗိုကျရှိ ကွှကျသားမြား နာကငျြတတျပါတယျ။
ဒါဆိုဘာကွောငျ့ ဒီခြောငျးကွီးက ဆိုးလာရတာလဲ။ တခါတလေ ခြောငျးဆိုးတာကတော့ လညျခြောငျးထဲ ပွငျပက ဖုနျတဈခုခုဝငျသှားရငျ ပွနျထုတျတဲ့ သဘောအနနေဲ့ ခြောငျးဆိုးတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခြောငျးဆိုးတာ ၁ ပတျလောကျရှိနရေငျတော့ အကွောငျး တဈခုခုရှိနပေါပွီ။ အဓိကအကွောငျးရငျးတှကေတော့ နှာစေး၊ နှာရညျယိုခွငျးဖွဈတဲ့အခါ နှာရညျဟာ လညျခြောငျးထဲ စီးသှားလြှငျ ခြောငျးဆိုးတတျပါတယျ။ ပနျးနာရငျကွပျရှိနရေငျလညျး ခြောငျးဆိုးတတျပါတယျ။ နောကျအစာအိမျ ခဉျြရညျပွနျဆနျတတျတဲ့ရောဂါမှာဆိုလညျး အရညျဟာ လညျခြောငျးကို လှုံ့ဆျောမှုကွောငျ့ ခြောငျးဆိုးလာရပါတယျ။
လလေ့ာခကျြတှအေရ အထကျကပွောခဲ့တဲ့ အခကျြ ၃ ခကျြ တဈခုခုကွောငျ့ သို့မဟုတျ ပေါငျးစပျပွီးတော့ နာတာရှညျ ခြောငျးဆိုးခွငျးကို ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျထိ ဖွဈစပေါတယျ။ အခွားအကွောငျးအရာလေးတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။ အပျေါလလေမျးကွောငျးပိုးဝငျခွငျး၊ နမိုးနီးယားလို့ချေါတဲ့ အဆုတျရောငျရောဂါတှမှောလညျး ခြောငျးဆိုးတတျပါတယျ။ နောကျ သှေးပေါငျကြ ဆေးတှထေဲက ACEI အုပျစုဝငျတှဆေိုလညျး တခြို့လူတှမှော ခြောငျးဆိုးစပေါတယျ။ နာတာရှညျ လပွှေနျရောငျ ရောဂါရှိသူတှေ အထူးသဖွငျ့ ဆေးလိပျသောကျတဲ့ သူတှမှောလညျး ခြောငျးဆိုးစတေတျပါတယျ။
ခြောငျးဆိုးမှုကွောငျ့ နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးဝငျတတျပါတယျ။ ခြောငျးဆိုးခွငျးကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ခေါငျးထဲငွီးစီစီဖွဈခွငျး၊ မတရားအနျခွငျး၊ ဆီးမထိနျးနိုငျခွငျး၊ နောကျဆုံး နံရိုးပါ ကြိုးသှားနိုငျပါတယျ။
နာတာရှညျခြောငျးဆိုးတဲ့ အကွောငျးကို ရှာဖှဖေို့အတှကျ စဈဆေးခွငျးအခြို့ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ရငျဘတျဓာတျမှနျ ရိုကျကွညျ့ခွငျး၊ အဆုတျအလုပျတာဝနျ ကောငျးမကောငျးစဈခွငျး၊ သလိပျနာမူနာ ယူ၍စဈဆေးခွငျး၊ မှနျပွောငျးကွညျ့ခွငျး တှပွေုလုပျနိုငျပါတယျ။
ကုသတဲ့အခါမှာတော့ အဓိကဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးကို ရနိုငျရငျ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ လူနာတျောတျောမြားမြားမှာက တဈခုထကျ ပိုနတေတျကွပါတယျ။ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ဆေးတှကေတော့ နှာစေးပြောကျဆေးတှေ၊ ပနျးနာရငျကွပျရှူဆေးတှေ၊ ပိုးသတျဆေးတှေ၊ အစာအိမျဆေးတှေ၊ ခြောငျးဆိုးပြောကျဆေးတှေ သောကျသုံးလို့ ရပါတယျ။ သောကျဆေးတှကေတော့ ခြောငျးဆိုးရတဲ့ အကွောငျးရငျးပျေါ မူတညျပွီး ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။
အိမျတှငျးကုထုံးနညျးတှလေညျး တခြို့ အသုံးပွုကွပါတယျ။ တခြို့က ပြားရညျတဈဇှနျးကို ရနှေေးနဲ့ရောပွီး သောကျကွတယျ။ တခြို့က ဂငျြးပွုတျရညျပူပူသောကျကွတယျ။ တခြို့က လကျြဆားရယျ၊ သံပရာရညျ ရောသောကျတယျ။ တခြို့ လကျြဆားရယျ၊ သံပရာရညျရယျ၊ ပြားရညျရယျ၊ ဂငျြးရယျ ရောသောကျတတျကွပါတယျ။ တကယျပြောကျလား မပြောကျလားတော့ သခြောမသိပါ။
ခြောငျးဆိုးနသေူဟာ အနအေထိုငျ ဆငျခွငျရပါမယျ။ ဖုနျထူထပျတဲ့နရော သှားလာခွငျး၊ လူထူထပျတဲ့နရောသှားလာခွငျး ရှောငျကွဉျပါ။ ဆေးလိပျသောကျသူဆိုလြှငျ ဆေးလိပျဖွတျပါ။ မသောကျသူဆိုလြှငျ ဆေးလိပျငှဝေ့ေးဝေးရှောငျပါ။ အစာစားလြှငျ နညျးနညျးနဲ့ ခဏခဏစားပေးပါ။ အစာစားပွီး ၃ နာရီ၊ ၄ နာရီလောကျကွာမှ လှဲပေးပါ။ ညအိပျလြှငျ ခေါငျးအုံးမွငျ့မွငျ့ထားအိပျပါ။
Author: ဒေါကျတာ ဇှဲကောငျးခဈြ, Healthcare Journal, Vol 8, no 49 (22.12.17)
Dr. Zwe Kaung Chitခြောငျးဆိုးဒေါကျတာ ဇှဲကောငျးခဈြနာတာရှညျခြောငျးဆိုး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ မီးဖွားပြီးကာလတွင် ကြုံတွေ့ရမည့် ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုများ